UVULINDLELA UMFAZI UREE DRUMMOND UTYHILA UMHLA OQHELEKILEYO WOBUSUKU NGELADD - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Uvulindlela uMfazi uRee Drummond utyhila umhla oqhelekileyo woBusuku ngeLadd
URee Drummond (L) kunye noLadd Drummond bathatha ifoto ngexesha loSikhumbuzo loMfazi oMagazini kunye noRee Drummond eMason Jar ngoJuni 6, 2017 kwisiXeko saseNew York. (Ifoto nguMonica Schipper / Getty Izithombe zeMagazini yabasetyhini abaVulindlela)
Ngu: Esther Lee 10/19/2017 ngo-10: 40 AM
isangqa sokubandakanya ilitye lenyanga elimhlophe
Ubusuku bomhla wobuvulindlela nawo. Inkwenkwezi yenethiwekhi yokutya URee Drummond , Waziwa kakhulu yintanda yakhe Umfazi onguvulindlela ubukhosi, kutyhilwe kule veki ukuba umhla oqhelekileyo wobusuku nomyeni wakhe, ILadd Drummond , iyathandeka kwaye imnandi – nasemva kweminyaka engama-21 betshatile.
Sizakuvakala sibadala xa ndisitsho, utshilo uDrummond Ngeveki . Kodwa iya eTulsa kunye nesidlo sangokuhlwa esikhulu kunye newayini entle kunye nedizethi. Emva koko kuya kufuneka sikhweliswe ekhaya!
Indawo yokutya esekwe ePawhuska, e-Oklahoma zikho ezinye iintsuku xa bonwabela indawo yendawo. Ngamanye amaxesha siye kuqhuba, utshilo. Ngokwesiqhelo simamela umculo welizwe okanye unomathotholo we-ESPN-uhlobo oluthile lokuhlalutya kwebhola okwenzekayo ukuba ndijike ndiye ezantsi, kuba ibulala i-vibe yam.
Isithuba esabiwe nguRee Drummond -Umfazi onguVulindlela (@thepioneerwoman) ngoMeyi 17, 2017 nge-6: 06 pm PDT
Ngobusuku ekhaya, iDrummond iyapheka. Ndiyakucaphukela ukuba clichéd, kodwa kuhlala kuyinyama, wongeze watsho. Ndizokwenzela isosi yewayini yekhowa. Iitapile ezibhakwe kabini zekryptonite yakhe. Emva koko ezinye izimuncumuncu ngohlobo lwekhekhe eshushu yetshokholethi okanye brownies ene-ayisi khrim kunye nazo zonke izinto ezilungileyo.
Umbhali othengisa kakhulu kunye nebhlog edumileyo kutshanje uvule indlu yokuhlala e dolophini yakhe. 'Ihotele' ayibonakali ngathi yinkcazo efanelekileyo, kutsha nje ubhale Kwibhlog yakhe. Ubuntu bongezwe ku Nathi ukuba waziva ukuba lolukhetho olufanelekileyo ukwakha ipropathi ekuhlaleni.
Ngokwenene uhlobo lokuziva ngathi yimovie Intsimi yamaphupha, Uqhubeke. Kancinci iLadd kwaye sonwabile ukuya kuba nemihla ethile phaya! Sinokwenza imeko yokuhlala encinci, jonga nje ubusuku kwaye ube nathi.
Esi sibini sisandula ukubhiyozela iminyaka engama-21 sitshatile kwinyanga ephelileyo. Babelana ngabantwana abane, uPaige, uBryce, uAlex noTodd.
yintoni isipho esiqhelekileyo seminyaka yokuqala yomtshato?
thanda iikowuti ngaye